Ubuhle bokubuyela lapho owakhuleka khona | Scrolla Izindaba
Izimfihlo zase-Limpopo: UThabiso Sekhula wake waba namahloni ngokuba ngowasesigodini sase-Limpopo manje usethola kabusha umlingo nobuhle balendawo.
Uma ningizwa ngikhuluma kakhulu ngendlela engiyithanda ngayo i-Limpopo ngivumeleni ngoba ngachitha isikhathi esiningi sobuntwana bami ngicasukela leli khaya lami elihle.
Ngikhumbula ngiseNyuvesi yase-Tshwane ngenza izifundo zami ze-Journalism impendulo eyayithandwa yiwo wonke umuntu walapho ebuzwa ukuthi uphumaphi sonke sithi e-Polokwane.
Umcabango owawusemuva wawuthi uma kumele bazi ukuthi ungowase-Limpopo khetha indawo engeyona amahloni ongasuka kuyo futhi ushintshe indlela okhuluma ngayo.
Uma nje abantu bethola ukuthi ungowasesigodini edolobheni elikhulu njengePitoli noma iGoli zaziqala izinhlamba.
Cishe uneminyaka engu-18 noma engu-19 wenza unyaka wakho wokuqala eNyuvesi futhi kungokokuqala ngqa uhlala edolobheni elikhulu ingasaphathwa-ke eyokuthi uwedwa ukuze uvale ezinye zezinto ezikwenza uvelele futhi wenze kube lula kubantu ukuthi bakhethe kuwe.
Angazi ukuthi i-Limpopo kungani ingathandwa kangaka ngoba lesi isona isifunda okuphuma kuso uQueen Modjadji, uMiss SA Shudufadzo Musida, uCharlotte Maxeke noMaleboho.
Yeka udumo olukhulu lesi sifunda esinalo njengoba ama-Big 5 egcwele khona okuwukuphela kwendawo emhlabeni lapho ungathola khona izinombolo eziphezulu ze-Modjadji cycad, i-cycad ende kunazo zonke ezake zaba ukudla kwama-dinosaurs okuwukuphela kwendawo emhlabeni lapho uzothola imidwebo yobuciko ematsheni yama-San ama-Khoi nama-Bapedi entabeni eyodwa.
Angazi ukuthi iqale kuphi kodwa igcina ngami.
Ngayicasukela i-Limpopo ngoba ngangiyingane futhi engikwaziyo kwakuyizinkinga ezikhona kanye nobubi bempilo yasemakhaya. Ngangingazi ukuthi ngizobuyela kukho lapho imali nokunethezeka sengingakunakile.
Futhi naphezu kokuthi nganginamahloni futhi ngicasulwa indlela engikhuliswe ngayo i-Limpopo yangamukela ngothando nangokuqonda.
Manje sengithatha lonke ithuba ngihlola isifundazwe ngokwami.
Ngibonise zingane zami lapho ngakhulela khona kodwa okungcono kakhulu ngixhumane nekhaya elangenza ngibukise ngobuhle bami. Leyo yinani engijabulela ukulikhokha kuze kube phakade ngokuthatha kalula lendawo.